630A Mpanamboatra Fitaovana tariby | China 630A Cable Accessories Factory
15Kv630Deadbreak T Mandritra Connector
Anhuang manokana amin'ny Deadbreak T Fore Connector, manolotra kalitao maty tapaka T Fore Connector izahay. Fampiharana: ● Ho an'ny fifandraisana amin'ny tariby polymerika amin'ireo mpanova, mifamadika, maotera ary fitaovana hafa miaraka amin'ny mpampitohy azo zahana mialoha. ● Ho an'ny fametrahana anatiny sy ivelany. ● Volavolan'ny rafitra hatramin'ny 24 kV. ● 630 A mitohy ankehitriny (900 A mihoatra ny 8 ora). ● Antsipirian'ny tariby: - ​​Tariby polimerika (XLPE, EPR, sns) - Mpitondra vy na aliminioma - Semiconduc ...
12-24kV 630A Fampandehanana roa
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny Deadbreak T Rear Connector, izahay dia manome ny Connector T Rear Connector avo lenta. General: 630A Maty fiatoana Type Junction dia natao ho an'ny sehatr'asa tariby herinaratra any ivelany sy sehatry ny tariby herinaratra ambanin'ny tany. Izy io dia mety amin'ny boaty sampana, manodidina ny kabinetran'ny sampana famatsiana herinaratra amin'ny fomba eropeana, ary afaka mifandray amin'ny 630A Shield Fore Connector. Votoatin'ny kitapo: ● Junction Type Deadbreak ● Sheet Instruction Installation ● Ohatra fampiharana amin'ny taratasy fanamarinana kalitao: Reference Reference ...
Fampidirana fitaovana an-tsokosoko
Anhuang manokana amin'ny fampidirana aparatus bushing, manome fitaovana fampidirana bushing avo lenta izahay. Ankapobeny: 630A Fitaovana Fampidirana fitaovana dia natao ho an'ny kabinetra sampana karazana eropeana, kabinetra famatsiana herinaratra, ampiasaina amin'ny kabinetra sampana karazana eraopeana mifandray amin'ny herinaratra avo. Ireo bushings ireo dia afaka mifandray amin'ny mpampitohy tariby maty. Ireo bushing ireo dia voavolavola amin'ny alàlan'ny insulateur epoxy resin rubber vita amin'ny solifara avo lenta. Kit anatiny: l Fitaovana Bushings Ampidiro l ...
A BusZ-1225kV 630A Air Bushing
Anhuang manokana amin'ny Air Bushing, manome bus Bushing avo lenta izahay. General: 630A Air Bushing dia natao ho an'ny kabinetra sampana karazana eoropeana, kabinetra famatsiana herinaratra manodidina azy, ampiasaina amin'ny kabinetra karazana sampana eropeana mifandray amin'ny herinaratra avo. Napetraka ao anaty boaty tsy azo afangaro mba hampifandray ny mpampitohy Type 630A ho an'ny 630A. Ireo bushings ireo dia afaka mifandray amin'ny mpampitohy tariby maty. Ireo bushing a 『e vita amin'ny Epoxy Resin sy ny baran'ny varahina izay manana toetra mekanika sy elektrika ....
Fandraisana fitateram-potoana tsy tapaka
Anhuang manokana amin'ny Integral Dead break Bushing, manolotra bushing Integral Deadbreak Bushing avo lenta izahay. 12kV 630A Voasambotra maty bushing bushing dia natao ho an'ny Kabinetra Sampana Cable misy Sf6 Switch. Ireo mpampitohy misaraka, toy ny 630A T sy T-11 maty tapaka dia azo ampiasaina amin'ireo bushing ireo. Ireo bushing ireo dia nataon'i Epoxy Resin. Amin'ny zipo dia ataovy izay ahafahan'ny Dead break Rotatable Feed-thru Bushing ampiasaina tsara kokoa. Votoatin'ny kit: ● Bushing tapaka tsy tapaka ● Sarony manarona ● Fametrahana Ins ...
Mpampitohy SJT 15630A Cross
Anhuang manokana amin'ny mpampitohy Cross, manome mpampitohy Cross avo lenta izahay. Fampiharana: l Fifandraisana amin'ny casing switchgear dia azo tanterahina eo amin'ny fifandraisana switchgear marobe. l Volan'ny rafitra: 8. 7 / 15kV \_ 12 / 20kV. l Mandrakotra ankehitriny: 630A \_ 1250A. Toetra mampiavaka azy: l Raha ampiarahina amin'ny karazana C bushings dia misy fifandraisana feno misaraka sy feno hermetika azo zahana. Volavola unipolar, plug-in. l Busbar avy amin'ny boribory varahina boribory （fantsona) fitambarana, comp ...
Fiarahana DJT 5630A T
Anhuang manokana amin'ny T-joint, manome T-joint avo lenta izahay. Fampiharana: l Fifandraisana amin'ny casing switch switch dia azo tanterahina eo anelanelan'ny fifandraisana gear switch. l Volan'ny rafitra: 8. 7 / 15kV \_ 12 / 20kV. l Mandrakotra ankehitriny: 630A \_ 1250A. Toetra mampiavaka: l Raha ampiarahina amin'ny karazana C bushings dia misy fifandraisana feno misaraka sy feno hermetika azo zahana. Volavola unipolar, plug-in. l Busbar avy amin'ny boribory varahina boribory （fantsona) fitambarana, silikônaly mitambatra ambonin'ny ...
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny fitaovam-piadiana fitaovam-piadiana, izahay dia manome Bushing fitaovana tsara kalitao. Ankapobeny: 35kV 630A Fitaovana Bushing dia natao ho an'ny kabinetra sampana karazana eoropeana, kabinetra famatsiana herinaratra, ampiasaina amin'ny kabinetra sampana karazana eoropeana mifandray amin'ny herinaratra avo sy ny herin'ny rivotra. Ireo bushings ireo dia afaka mifandray amin'ny mpampitohy tariby maty. Ireo bushing ireo dia nataon'i Epoxy Resin izay manana toetra mekanika sy elektrika tsara. Rating naoty: famaritana Paramete ...
Anhuang manokana amin'ny Busbar 630A / 1250A, manome Busbar avo lenta izahay. General: Ny halavan'ny bisy L ka hatramin'ny fitaovan'ny fitaovana roa dia miorina eo afovoany, rehefa manafatra manome masontsivana; raha ny halavan'ny bisy no fototra, azafady farito. Fampahalalana momba ny kaomandy: Fampahalalana momba ny Reference No.
π Soraty ny mpampitohy eo aloha
Anhuang manam-pahaizana manokana amin'ny mpampitohy eo aloha azo kasihana πtype, manolotra mpampitohy eo aloha azo kitihina aloha isika karazana π. Ankapobeny: conn Karazana mpampitohy eo aloha azo ampiasana amin'ny tambazotra peratra alohan'ny fiara, ny sampana tariby misy ny boaty na boaty dia lasa rafitra harato peratra lehibe indrindra, toy ny fifandraisana tariby miditra sy mivoaka. Azo ampifandraisina amin'ny fihaonan'ny 630A ary amin'ny alàlan'ny farany dia hikasika ny fitambaran-tsokajy mba hamoronana boribory mifandray kokoa. Ny isa misy ny mpampitohy T touchable aloha dia 630A, mihatra amin'ny 25-300m ...
35kV 630A T Cable Connector
Anhuang manokana amin'ny T Cable Connector, manome Connector Cable T avo lenta izahay. General: 35kV 630A T Cable Connector dia manome fifandraisana voarindra sy feno anaty rano tanteraka rehefa ampifanarahana amin'ny bushing na plug mety. Ho fampifandraisana ny tariby polymerika amin'ireo mpanova, miovaova fitaovana, motera ary fitaovana hafa misy mpampitohy azo sarahina. Ny teboka fanadinana capacitance azo avela dia ahafahana manamarina mora ny fizotry ny fizaran-tany na fametrahana mari-pamantarana diso. Ireo 36kV 630A T Cable Co ...